Qaliinka ididiilo hore aadanaha xubin madaxa ka dhigaysa garoonka dhakhaatiirta Maraykanka - Rule News
Qaliinka ididiilo hore aadanaha xubin madaxa ka dhigaysa garoonka dhakhaatiirta Maraykanka
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “Qaliinka ididiilo hore aadanaha xubin madaxa ka dhigaysa garoonka dhakhaatiirta Maraykanka” waxaa qoray Sam Thielman ee Annapolis, u theguardian.com on Saturday 13 June 2015 12.38 UTC
On galabta Hotel Westin ee Annapolis, Maryland, la iskaa wax u qabso ah ee aadanaha xubin ugu horeysay madaxa by kooxdiisa, Dr Sergio Canavero dalab in ay qortaan dhakhaatiir qalliin oo doonaya in aan caawiyo isaga nidaamka ka dhagaystayaasha ah dhakhaatiirta la shaqayn jiray kulanka sannadlaha ah ee American Academy of dareemayaasha iyo Lafaha Qaliinka.
About rubuc ka mid ah fadhiga la siiyey in ka badan in kaamirooyinka video, tripods iyo nalalka taribuunka. Si aad u hesho dhakhtar jaraa'id-saaxiibtinimo si ay u hore ee qolka, mid ka mid ah qayb galayaasha lahaa in ay qaataan makarafoon podium iyo hoos gelin ku xoo ku wareegsan Canavero: "'I Scuse, press, Waxaan jeclaan lahaa in aad dib u off, fadlan. Enough waa ku filan ".
Mawduuca ah Canavero ee diridda ahaa hab uu rajeynayo in ay sameeyaan ee soo socda 24 bilood, taas oo uu ku magacaabay madaxa Anatomosis Venture, ama "Jannada".
"Maanta waxaan halkaan u joogaa inaan na siiso oo dhan aragti,"Ayuu yiri Canavero.
Dhakhtar ayaa intaa ku daray in ay jirto wax sida is, iyo in goolkii ugu dambeeyey ee mashruuca ahaa kordhiyo nolosha.
Wixii laba saacadood iyo badh (soo bandhigidda waxaa la qorsheeyey 90 daqiiqo) hore ee dhagaystayaasha ah inta badan buluug- iyo cawl-dhakhtar qalliin oo ku haboon da'da dhexe, Canavero socod balladhka qolka dheer in suun isku cream iyo qaawanaanta guduudan-brown ah, bespectacled, madaxiisiina wuu xiiray, raadinaya sida wadaad ah gaar ahaan hip.
Sergio Canavero oo sheegtay inuu si ay u fuliyaan xubin madaxa a noqon doonaa. Sawir: Youtube
Waxa uu inta badan nus-saac hore ku qaatay rasaas off aphorism ka dib markii aphorism, qaar ka mid ah qoraayaasha ay ka mid yihiin Kierkegaard iyo Arthur C Clarke, kuwa kale ee uu ka Dhumay Xagooda.
"Haddii Samadu waa qayrul-, dabiiciga ah waa crazier, iyo dabeecadda waa in la siiyaa hakin marka ay timaado waxa ay noo sameeyo oo dhan inay sida xayawaan meerahaas,"Ayuu yiri.
Qofkale oo waxay ku, ee Italy ayaa Turin Advanced Neuromodulation Group, xakamihii dhexeeya isku dayaya inuu dhiirigeliyo dhegeystayaasha uu, qoto dheer qodaya galay neurobiology iyo goading u soo ururay oo isaga ka soo hor xirfadlayaasha caafimaadka cad-lehba. Marka hal dhibic oo uu la barbar dhigo hab ee guusha mustaqbalka in ay soo caga dayaxa, la image ah ee JFK shaashadda meel isaga ka dambaysa.
"Waa in aan dayaxa tagaan si ay u tijaabiso kuwa aan nahay, si ay u tijaabiso xirfad, si ay u tijaabiso kalsoonideena, si ay u arkaan noocee ah ragga aan nahay!"Ayuu yiri.
"Waa in aan sidaas u yeelaan inay tijaabiso America! Waa in aan u sameeyo si loo arko haddii aad weli Americans! Markii aan ku soo koray America ahaa hogaanka. "
Pay sare ididiilo iyo taageero ka "bilyaneer American", Canavero u sheegay shirka ka: "Waxaan u imid in aad; Waan ku faraxsanahay aqbalay yeedhi si hoosaysa iman ka hor inta aadan si ay u sameeyaan kiis in tani ay tahay suurto gal ah. "
Waxa uu sheegay in uu qorsheeynayo in uu fuliyo nidaamka ama Mareykanka ama Shiinaha.
Hoosaysiin ma ahaa tayo leh dhagaystayaasha u muuqdeen in ay dareento in Canavero.
"Waxaad ka mid ah dadka oo dhan waxay leeyihiin dareen kama dambaysta ah ee is, ma khayaal ah,"Ayuu yiri dhakhtarku ugu horeeyay ee khatar su'aal ee Q ah&Casharka A. "Waxa is waa bukaanka? Jirku wuxuu cusub, ama is in uu la dhibtoonaya la?"
"Isaga Iswaydii,"Jawaabay Canavero.
Valery Spiridonov, ninkii ayaa si iskeed ah si uu tijaabada habka, hadlay yar kulmintii, laakiin waxa uu ahaa shakhsi oo xiiso weyn. Spiridonov uu leeyahay cudurka Werdnig-Hoffmann, ama atrophy muruqa laf-. Waa curyaamiyaa ah, xaalad danbeyn dilaa in mar hore qabsaday toll muuqata on 30-sano jir ah Ruushka ee jirka. Spiridonov saxafadeed Canavero si lama filaan ah markii mashruuca dhakhtarka bilaabay in ay helaan dareenka saxaafadeed.
Valery Spiridonov: "Waxaan aaminsanahay jidhkayga waa uun makaanikada in aan doonayo in aan ka saarnay" Sawir: Corbis
Spiridonov jawaabay su'aasha.
"Waxaan aaminsanahay jidhkayga oo kaliya waa makaanikada in aan doonayo in aan ka fogaynayaa,"Ayuu yiri. Waxa uu ka hadlay isagoo inuu shaqaalayaal u kireeyo dadka u gargaarta oo ka soo booskiisa kursiga curyaanka yar ee soo socda in ay marxaladda.
Dhakhaatiirta kale, Saciid Canavero, ayaa su'aal ka keenay in aan heerka diidmada sare ee xubnaha iyo Addinka xagjirka suuragal ah in bukaanka ah xubin jirka ka buuxa tagaan ka baxay maskaxdiisa. Canavero iyaga oo u sheegay in ay is qiyaasi meel Spiridonov ee.
"Ma rabtaa inaad rumaysan tahay in xaalad aad eryi karin si waali, waalli?"Ayuu is weydiiyay Spiridonov.
"Haa,"Jawaabay Spiridonov. "Maalin kasta."
Maxay ku saabsan halbowlaha jilibka laf-?
Su'aasha kale, Dabcan, waa in ama aan qaliinka waa suurto gal. Canavero tilmaamay in madaxa tallaalid ee jiirka si guul leh loo sameeyaa ee Shiinaha, oo wuxuu ku yidhi polyetylen tones in (PEG) - Kaas oo la sida calool jilciye inta badan loo isticmaalaa, laakiin waxa uu la ogaaday in ay leeyihiin codsiyada dadka bukaanka ah iyo dhaawac lafdhabarta - muhiimad u ogolow in laga yaabo xarumaha motor ka mid ah laf-dhabarta ka dib wada si guul ka dib markii ay la soo jareen.
Mid ka mid ah dhakhtar gooyey Canavero dhexe ee uu muxaadaro inuu caddeeyo inay, sida dhakhtar qalliin oo vascular, uu ka walaacsan ku saabsan, iyo kuwo kale, halbowlaha jilibka laf-.
"Waxaad tahay qof xaq u dhimo qeybiso iyada oo in,"Ayuu yiri. Canavero u yeedhay isaga inuu ku biiro kooxda uu yahay, isagoo sheegay inuu ku sameeyey uu qayb iyo hadda waxay u ahayd wakhti si ay u kor u qaado.
Dhakhaatiirtu waxay kala qaybsameen on inkale si ay u qabtaan habraaca oo dhan. Ma xubin madaxa anshaxa?
"Ma garanayo,"Ayuu yiri Oscar Tuazon, dhakhtar qalliin oo ku salaysan ee u dhow Alexandria. "In aadanuhu, Waxa ugu weyn waa madaxa! Jirku wuxuu u yahay oo keliya qaab ama madfac. Sidaas ayaa u sheegay madaxa in muhiim. Waxaa laga yaabaa in, Aynu niraahno, haddii uu qof u weyn yahay, sida Einstein, laga yaabaa in aad loo ilaalin karo. "
Tuazon ka qeyb galay shirka la Edith Tuazon, kalkaaliye caafimaad iyo xaaskiisa oo ah 44 sano. Waxay ahayd ku filneeyn.
"Waxaan dareemayaa sida ay u fogaatay,"Ayay tiri. "Ka soo qaad waxaad leedahay xubin madaxa ah oo ah qof ka artist ah iyo qof ma ahan artist ah -will qof in ay awoodaan in ay ka dhigaan hubka iyo gacmaha oo weli ka dhaansado? Gacanta weli 'malaynayo?'U malaynayo sida ay hore u sameeyey? Sidee dhammaan hawlaha kuwa u wada shaqaynayan?"
Canavero lahaa jawaabtiisa in mid ka mid ah in soo jeedinta: "Waxaad ka jareen spaghetto, waxaad codsan PEG, iyo ganacsigii. "
Skype Diyaarinta 3D Video Technology
18624	0 Qodobka, cilmi Medical, News, Sam Thielman, Science, US news, news World
← Daraasad ayaa sheegtay in la helo New link hidde u dhaxaysa hal-abuurka iyo cudurada dhimirka The 11 Kulan PlayStation aad gabi ahaanba ma dhici karta in sanadka soo socda →
The Camera Smart Security BEST [VIDEO]
Movavi Video Editor: Jawaabaha oo dhan Video Tafatiridda Baahiyaha
OnePlus 6: All Glass, Screen waaweyn